यूट्यूबका लागि एक अरब डलर? हुनसक्छ। | Martech Zone
यूट्यूबका लागि एक अरब डलर? हुनसक्छ।
आइतबार, अक्टोबर 1, 2006 आइतबार, अक्टोबर 1, 2006 Douglas Karr
त्यहाँ अरबौं डलरको बारेमा धेरै चर्चाहरू छन् जुन युट्युब, माईस्पेस, फेसबुक, इत्यादिको बिक्रीको बारेमा छलफल र पास भएको छ। मार्क क्युबन छ भन्यो केवल एक मौरनले यूट्यूबको लागि यति तिर्ने थियो। म निश्चित छु यदि हामी समय फिर्ता पाउन सक्दछौं भने, धेरै व्यक्तिहरू सोच्दै छन् कि किन श्री क्यूबानले डट कॉम बस्टमा गरेको भन्दा धेरै पैसा कमाए। मैले उनलाई 'दुर्घटनात्मक करोडपति' भनेर बोलाएको सुनेको छु र मलाई लाग्छ यो फिट हुन सक्छ। मैले उनको ब्लगको एक धेरै पढेको छु र यो १२ वर्षको केटीको माइस्पेस पढ्ने जस्तै छ। उनले भने, उनले भनिन्, ब्लाह, ब्लाह, ब्लाह।
डट कॉम बूम र बस्ट एक आवश्यक असफलता हो जुन उन्नत टेक्नोलोजी र वेबको लागि यो आफ्नै अर्थव्यवस्था हो। धेरै पैसा खर्च गरियो र राम्रो व्यापार मोडेलको खोजीमा थियो। यद्यपि यो अझै क्रमबद्ध गरिएको छैन, व्यवसाय मोडेल आकार लिन सुरु भयो।
म 'नेत्रगोलहरू' नाप्ने ठूलो आलोचक भएको छु तर यस्तो देखिन्छ कि यो नयाँ वेब अर्थव्यवस्था के हो। यूट्यूब सामग्री वा टेक्नोलोजीका लागि किन्नु भइरहेको छैन - यो उच्च स्तरमा यसको मूल्याra्कन भइरहेको छ किनभने यसमा मोहित श्रोताको सदस्य संख्या छ। यदि एक अरब डलर यूट्यूबको लागि धेरै छ भने, किन फोर्डलाई केहि अरबको लागि बेच्न ठीक हुन्छ? फोर्डले या त नाफा कमाइरहेको छैन ... तर सबैलाई थाहा छ यो यसको लायक हो। दुर्भाग्यवस, यदि यूट्यूब एक प्रमुख इन्टरनेट पावर द्वारा खरीद गरिएको छ… यसले उनीहरूको ब्रान्डमा धेरै 'आईबलहरू' थप गर्दछ।
यसलाई मार्केट सेयर भनिन्छ।
र हामी वेबमा मार्केट सेयरको आकार लिन सुरु गर्दैछौं। गुगल, याहू! र माइक्रोसफ्ट सबै मार्केट सेयर खोज्दै र खरीद गर्दैछन्। फलस्वरूप, कुनै पनि ज्यादै ठूलो टिभी वा रेडियो स्टेशन जस्तै धेरै दर्शकहरूको साथ साइट लक्ष्य हुन्छ जब उनीहरूसँग ठूलो दर्शक हुन्छन्। जे होस् राजस्व हालै छैन ... आज तपाईले किन्न सक्ने अधिक दर्शक भोली विज्ञापन राजस्वमा भुक्तान गर्नेछन्। यो पुरानो मोडेल हो जुन अन्य मिडिया मोडेलहरूसँग काम गर्दछ - अखबारहरू उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। अधिक राजस्व ग्राहक राजस्व भन्दा विज्ञापन राजस्वमा एक ग्राहकबाट बनाइएको छ।
म अझै पक्का यकिन छैन कि 'आईबलहरू किन्ने' को व्यवसाय मोडल इन्टरनेट ईन्डस्ट्रीको लागि राम्रो छ, यद्यपि। मलाई लाग्छ हामीले कुर्नु पर्छ र हेर्नु पर्छ।
पेराइज क्यालकुलेटर AJAX संस्करण समाप्त!